Hetsi-panoherana Tany Venezoela : Maty Voaatifitra Teo Amin’ny Lohany Ilay Mpanjakavavin’ny Hatsarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2014 13:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Swahili, Português, عربي, বাংলা, Español
Maty tamin'ny 19 Febroary noho ny bala nahazo azy teo amin'ny lohany ny omalin'io, nandritra ilay hetsi-panoherana ny fitondrana, i Génesis Carmona, tanora Venezoeliana mpianatra sady mpanjakan'ny hatsarana.
Namoaka ireo angona bitsika avy amin'ny mpampiasa Twitter, Héctor Rotunda (@Hecalo), izay mitantara ny zava-niseho nanomboka tamin'ny fotoana nahavoatifitra an'i Génesis Carmona mandra-pahafatiny ny gazety iray any Caracas. Teo amin'ilay toerana nisy ilay hetsi-panoherana i Rotunda sy ilay mpanjakavavin'ny hatsarana nodimandry.
Mitohy ny fanehoam-pahatezerana sy ny fanamelohana ao amin'ny Twitter. Ny Governoran'ny Fanjakan'i Carabobo, Francisco Ameliach, no voalaza fa fototr'iny fanafihana ny hetsi-panoherana tany Valencia iny. Andro vitsivitsy lasa izay, nandefa hafatra tamin'ny Twitter ny Governora nilaza fa zatra miampanga azy ho mamporisika ny fampiasan-kery ny mpanohitra amin'izao. Amin'ity bitsika manaraka ity, ohatra, dia tononony ny UBCH [es], ny Bolívar – Vondron-tafik'i Chávez (Unidades de Batalla Bolívar – Chávez) an'ny Antoko Sosialista Mivondrona ao Venezoela (PSUV – Partido Socialista Unido de Venezuela), Antoko eo amin'ny fitondrana.
Filohan'ny Solombavambahoaka (Parlemanta Venezoeliana) amin'izao fotoana izao i Diosdado Cabello.
Carmona izany no faninefany tamin'ireo niharan-doza tamin'ny hetsi-panoherana tany Venezoela.